Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. waa shirkad soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga ah ku takhasusay processing qoto dheer oo waxyaabaha beeraha. Qarnigii 21aad, waxa ay ku jawaabay si call Guddiga xisbiga ee Central dhismaha ah "Maritime Silk Road" in ay u oggolaadaan waxyaabaha beeraha Shiinaha si ay ugu adeegaan Southeast Asia, Central Asia, West Asia, Waqooyiga Afrika, iyo bariga iyo badhtamaha Europe.
Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa aasaasihii Confucianism, Nebina dalkiisa ee Confucius, Jinan, Shandong, Shiinaha. Magaalada Jinan ayaa 72 magacyada ilo, kasta oo biyo ah guga qoyska, qoysaska ooyaya safsaf, iyadoo muuqaal qurux badan, oo ay dunida oo caan ah. Shirkadda inta badan ka hadlaya processing qoto dheer oo qaaska ah dalagyada beeraha, sida: basbaas, waxyaabaha maraqa suugo basbaas, waxyaabaha xawaash xawaashka leh, alaabta soy la qaboojiyey, wax soo saarka miraha qasacadeysan, waxyaabaha Hawthorn, waxyaabaha toon, waxyaabaha jujube, qoto-habka wax soo saarka digaag processing qoto dheer iyo alaabooyinka kale ee.
Shirkadda Our mar walba dhaqmayso ruuxa bini'aadamnimada ah "iskaashi la sumcad, horumarinta tayada doondoonaan, qaado dalabka suuqa, isagoo ah hanuuniye ah, oo ka soo qaado lacagta labada dhinac iyo guul ay aasaas" si uu u doondoono horumarinta caadiga ah.
Vision: dhis madal eber-meel fog dunida si ay u fahmaan Chinese Mission soo saarka beeraha: Si aad u noqoto ku guide iyo dhakhtarka ee warshadaha ee dhoofinta wax soo saarka beeraha, iyo si kor loogu qaado faafinta Qiimayaasha dhaqanka Confucian: From Lilliput in la dhiso Community a of Health Human masiirka